Iyini ithrafikhi yokudluliselwa? Kungani kubalulekile? UJack Miller, iMenenja yeMpumelelo Yezimakhasimende Ephezulu Semalt , uchaza ukuthi ukuhanjiswa kwezimoto yiyona ingxenye yethrafikhi ehlala kusayithi lakho ngomunye umthombo. Umthombo ungaba isixhumanisi esivela kwenye isizinda. I-Google Analytics yazi ngokushesha lapho ithrefikhi yewebhu ingakafiki khona kusayithi lakho - synchroline greece. Njengoba kunjalo (i-Google Analytics) izobonisa amagama wesizinda alawa mawebhusayithi njengemithombo yokuthutha yomgwaqo emibikweni yayo.